Mvura kununura michina Fekitori - China Mvura kununura michina Vagadziri, Vatengesi
1.Overview Iyo isina waya kure kudzora akangwara simba hupenyu buoy idiki-inoponesa-inoponesa hupenyu-irobhoti iyo inogona kushandiswa kure. Inogona kushandiswa zvakanyanya mukununurwa kwemvura inodonha mumadziva ekushambira, madziva, nzizi, mahombekombe, yachts, maferi uye mafashama. Remote control inoonekwa kuburikidza neremote control, uye mashandiro ari nyore. Iyo isina kuburitswa kumhanya ndeye 6m / s, iyo inogona kukurumidza kusvika kune munhu akawira mumvura kununurwa. Iyo inomhanya mhanya ndeye 2m / s. Kune mhoro ...
Mukutarisisa Iyo ROV-48 Mvura kununura kure kudzora robhoti idiki diki-inodzora isina kudzika mvura yekutsvaga uye kununura robhoti yekudzimisa moto, iyo inonyanya kushandiswa pakununura nzvimbo yemvura mune zviitiko zvakaita semadhorobha, nzizi, mabhishi, maferi, uye mafashama. Mumabasa echinyakare ekununura, vanunuri vakatyaira igwa repasi pegungwa kana ivo pachavo kupinda munzvimbo yekudonha yemvura kununura. Midziyo mikuru yekununura yaishandiswa yaive chikepe chepasi pegungwa, tambo yekuchengetedza, bhachi rehupenyu, buoy hwehupenyu, nezvimwewo zvechivanhu ...
Nhanganyaya marobhoti epasi pemvura, anonziwo asina kunyorwa anodzorwa ari pasi pemvura, imhando yemarobhoti ekushanda zvakanyanya anoshanda pasi pemvura. Nzvimbo yepasi pemvura yakaoma uye ine njodzi, uye kudzika kwekudonha kwevanhu kunogumira, saka marobhoti epasi pemvura ave chinhu chakakosha mukusimudzira gungwa. Kune anonyanya marudzi maviri eanosimudzwa ari kure anodzorwa submersibles: tambo iri kure inodzorwa submersibles uye tambo isina kure inodzorwa ari pasi. Pakati pavo, yakaiswa waya ...